प्रचण्ड -माधव समूहको आम हड्तालमा देशभर के के भए ? सम्पूर्ण अपडेट « ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
प्रचण्ड -माधव समूहको आम हड्तालमा देशभर के के भए ? सम्पूर्ण अपडेट
काठमाडौं, २२ माघ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा का प्रचण्ड माधव समूहले आह्वान गरेको आमहड्तालको प्रभाव देखिएको छ । लामो दूरीका सवारीसाधन सञ्चालनमा आएका छैनन् भने ग्रामिण भेगमा अवरोध नभएको तथा शहरी क्षेत्रमा समेत भित्री बाटोमा गाडी चलेका छन् ।
गृह मन्त्रालयले सवारी सञ्चालन गर्न यातायात व्यवसायीहरुलाई आह्वान गरेको थियो तर व्यवसायीहरुले सञ्चालन गरेनन् । विभिन्न जिल्लाबाट छुटेका रात्री सेवाका गाडीहरुलाई प्रहरीले स्कर्टिङ गरेर कटाएको छ भने ट्रकहरुलाई पनि सञ्चालनमा सहजिकरण गरेको छ । त्यसक्रममा ठाउँठाउँमा सवारीसाधनमाथि ढुंगा प्रहार भएको छ भने काठमाडौंमा ट्याक्सीसमेत आगजनी भएको छ । प्रहरीका अनुसार देशभर ९७ जना पक्राउ परेका छन् ।
बिहीबार बिहान ११ बजेसम्म उपत्यकासहित ७७ ओटै जिल्लाको अवस्था यस्तो छ ।
प्रदेश १ धरानमा झडप
प्रदेश प्रहरी प्रमुख ईश्वरबाबु कार्कीका अनुसार लामो दूरीका सवारीसाधन सञ्चालन नभए पनि छोटो दूरीमा यातायात आवगमनमा बाधा छैन ।
मोरङ र झापामा टायर बाल्ने प्रयास भए पनि प्रहरीले तितरबितर । ‘इलाममा ट्रकलाई ढुंगा हानिएको थियो यद्यपि, अहिले स्थिति शान्त छ’।
बिराटनगरमा बिहीबार बिहानैदेखि प्रचण्ड-माधव समूहका नेता, कार्यकर्ता सडकमा निस्किएका छन् । सिटी सफारी जस्ता तीनपाङ्गे सवारीसाधनले सडकमा मानिसहरु ओसारिरहेका छन् । प्रदेश १ मा मोटरसाइकल निर्वादरुपमा चलिरहेका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका एसपी कमल थापाका अनुसार हाल स्थिति नियन्त्रणमा आइसकेको छ । धरानमा सवारीसाधनमाथि ढुङ्गा प्रहरी गरेको आरोपमा प्रहरीले एकजनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
प्रदेश नं २ मा सवारीसाधनहरु अत्यन्त न्यून चलेका छन् ।बन्दकर्ताहरु मुख्य राजमार्गमा बसेर सवारी सञ्चालनमा अवरोध गरिरहेका छन् ।
पूर्वमन्त्री अजयशंकर नायक सिराहामा कार्यकर्ता लिएर सडकमा हुनुहुन्छ । चन्द्रनिगाहपुरमा पूर्वसांसद रामकुमार भट्टराईले नेतृत्व गर्नुभएको छ ।
लहानमा बिहीबार बिहानै ७३५२ नम्बरको ट्रकमा ढुंगा हानिएको प्रहरीले जनाएको छ । त्यसमा संलग्न दुई जना तत्काल पक्राउ गरिएको प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी धिरजप्रताप सिंहले बताउनुभयो ।
वीरगञ्ज संवाददाता सुरेश विडारीका अनुसार आमहड्तालमा अवरोध गरेको भन्दै प्रहरीले १७ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । वीरगञ्ज महानगर अध्यक्ष रहबर अन्सारी, युवा नेता अरविन्द सिंह, विद्यार्थी नेता प्रभाकर गुप्तासहितका व्यक्तिहरु पक्राउ परेका छन्।
बागमती – सिन्धुपाल्चोकमा छैन प्रभाव
बागमती प्रदेशमा प्रहरीले लामो दूरीका सवारीसाधनलाई स्कर्टिङ गरेर विभिन्न जिल्ला पठाइरहेको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयकी प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक मिरा चौधरीका अनुसार मकवानपुरको ठाडाभन्ज्याङ र चितवनको आँपटारीमा दुई वटा ट्रकमा ढुंगासमेत हानिएको छ ।
सिन्धुपाल्चोकमा ९० प्रतिशत खुला रहेको प्रहरीले जनाएको छ । अन्य जिल्लामा आंशिक प्रभाव छ । भित्री बाटोमा सवारी सञ्चालनमा कुनै अवरोध छैन ।
उपत्यका – शीर्ष नेताहरु सडकमा
काठमाडौं उपत्यकामा आमहड्ताल सफल पार्न भन्दै प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफैं सडकमा आउनु भएको छ भने छोरी रणु दाहालसहित सातदोबाटो, पुल्चोक लगायतका क्षेत्रमा पुगेर उहाले सम्बोधन समेत गर्नुभएको थियो ।
सातदोबाटोमा प्रचण्डले सरकारले बलमिच्याइँ गरेर संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्ति गरेकाले त्यसबारे जनतालाई जानकारी दिन सडकमा आउनु परेको बताए । सम्भवतः फागुन पहिलो सातादेखि संयुक्त आन्दोलन हुने समेत उहाँले बताउनुभयो ।
रत्नपार्क क्षेत्रमा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभएको छ । प्रचण्ड–माधव समूहको संघर्ष समिति संयोजक समेत रहेका श्रेष्ठले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा धरपकड गरेर सरकारले द्वन्द्व निम्त्याउन खोजेको बताउनुभयो ।
प्रचण्ड(नेपाल पक्षका स्थायी समितिका सदस्यहरुलाई हड्ताल कार्यान्वयन गराउन जिम्मेवारी तोकिएको हो ।
कुन स्थानको जिम्मा कसलाई ?
कोटेश्वर – लीलामणि पोखरेल
सातदोबाटो – देव गुरुङ
पुल्चोक – पम्फा भुसाल
गोंगबु – भीम रावल
बालाजु – रघुजी पन्त
बल्खु – बेदुराम भुसाल
चाबहिल – वर्षमान पुन र हरिबोल गजुरेल
कलङ्की चोक – युवराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्य
नारायणगोपालचोक र महाराजगञ्ज – शक्ति बस्नेत
रत्नपार्क – नारायणकाजी श्रेष्ठ तथा जनार्दन शर्मा
पूर्वसभामुख एवं स्थायी समिति सदस्य कृष्णबहादुर महरा पनि सातदोबाटोमा देखिनु भएको छ । अर्का अध्यक्ष माधव नेपाल कोटेश्वरमा स्कुटिमा चढेर निस्कनु भएको छ ।
हालसम्म सडकमा अवरोध गरेको भनेर प्रहरीले उपत्यकाबाट ८० जनालाई पक्राउ गरेको छ भने हड्तालको आंशिक प्रभाव देखिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश – ठाउँठाउँमा प्रदर्शन
बन्दकर्ताले महेन्द्रपुलमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । प्रदर्शनमा रामकाजी गुरुङ, दीपक कोइराला लगायतका नेताहरु देखिएका छन् । ओली समूहका नेता, कार्यकर्ताले भने बन्दको विरोधमा मोटरसाइकल र्‍याली निकालेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पोखराका डीएसपी सुवास हमालका अनुसार हालसम्म जिल्लामा कुनै उछृंखल गतिविधि भएका छैनन् । कसैलाई पनि पक्राउ गरिएको छैन ।
लुम्बिनी – व्यापक प्रहरी परिचालन
लुम्बिनी प्रदेशमा बन्दको आंशिक प्रभाव रहेको प्रदेश प्रहरीले जनाएको छ । ठाउँठाउँमा प्रचण्ड माधव समूहका नेता, कार्यकर्ता निस्किएका छन् । यात्रा गर्न चाहनेले सुरक्षा माग स्कर्टिङको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
प्रदेशको मुकाम बुटवलमा बिहानैदेखि सार्वजनिक यातायात र मालवाहक सवारीसाधनहरु नचल्न सकेका छैन। बजार, शिक्षण संस्थाहरु पनि बन्द छन् । आन्दोलनकारीले सडकमा टायर बालेर, ट्रक तेर्स्याएर सवारी साधन चल्न दिएका छैनन् ।
प्रहरी गस्ती पनि बढाइएको छ भने बुटवलको राजमार्ग चौराहामा नेकपा प्रचण्ड(माधव समूहका युवा नेता राजु गुरुङको नेतृत्वमा नेता, कार्यकर्ता जम्मा भएका छन् । रुपन्देहीमा बिहान ९ बजेसम्म आम हड्तालका क्रममा कुनै अप्रिय घटना नभएको रुपन्देही प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी सत्यनारायण थापाले बताउनुभयो।
कर्णाली – एउटा पक्ष बन्द गराउने, अर्को खोल्न भन्ने
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार राजमार्गमा सवारीसाधन चलेका छैनन् । प्रचण्ड(माधव समूहका नेता कार्यकर्ता बन्द गराउनु पर्‍यो भन्दै हिँडेका छन् भने ओली समूहका नेता, कार्यकर्ताहरु खुला गर्न माग गरिरहेका छन् ।
सुर्खेतमा पसलहरु खुलेका छैनन् । प्रहरीले विभिन्न ठाउँमा डाइभर्सन गराएर लामो दूरीको यातायात सञ्चालन गराइरहेको प्रदेश प्रहरी प्रमुख वसन्त पन्त ले बताउनुभयो ।
सुदूरपश्चिम डेढ सय गाडी स्कर्टिङ
‘प्रहरीको उपस्थिति भएको ठाउँ शान्त छ, राजमार्ग सबैतिर प्रहरीको उपस्थिति सम्भव हुँदैन’, , ‘नाइट बसलाई स्कर्टिङ गरेर पठाइरहेका छौं ।’ एक प्रहरी अधिकारी ले भन्नुभयो ।
विशेष गरी बुधबार साँझ काठमाडौंबाट बाजुरा, दार्चुला लगायतका ठाउँका लागि छुटेका डेढ सय बढी सवारीसाधनलाई स्कर्टिङ गरेर पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ । स्कर्टिङमा नेपाल प्रहरीसँगै सशस्त्र प्रहरीले पनि साथ दिएको छ ।